घरज्वाई बस्ने केटा खोज्दै ज्योति मगर : कसरी बनाइन् भव्य महल, लग्जरी कार ? – Daily NpNews
क´र्मको कुरा छोडौ, भाग्य च´म्किदा एकै रातमा क´रोडपति बने यी युवा
खुट्टामा यस्तो समस्या त छैन ? हुनसक्छ गंभिर रोगको संकेत
मृत्युको १० महिनापछि जव बाबुको यस्तो पत्र भेटियो, थामिएन छोरीको आँशु !
सार्वजनिक बसमा एक जोडी यस्तो अवस्थामा भेटिए, भिडियो बन्यो भाइरल
हे भगवान् के भयो यस्तो ! अस्पतालको सानो गल्तीले मृ,त शिशुको जन्म
खुट्टामा यस्ता ६ चिन्ह हुने महिलासँग बिवाह गर्नु निकै शु’भ !
अत्यन्त दुखको खबर !! बेलायतमा देखिएकै नयाँ स्वरूपको कोरोना भा’इरस नेपालमा भित्रिएको पुष्टि
बेहुलाको पैसावाट ८ लाखको किनमेल त्यसपछि बेहुली फरार
नेपालमा सबैभन्दा धेरै, वार्षिक पौने दुई करोड तलब सुविधा लिने, को हुन् यी महिला ..
कुलमानको सपना चकनाचुर हुँदै, नेपाल फेरि अँध्यारो युगमा प्रवेश
मुख्य पृष्ठ /मनोरंजन/घरज्वाई बस्ने केटा खोज्दै ज्योति मगर : कसरी बनाइन् भव्य महल, लग्जरी कार ?
घरज्वाई बस्ने केटा खोज्दै ज्योति मगर : कसरी बनाइन् भव्य महल, लग्जरी कार ?
772 Less thanaminute
काठमाडौं । चर्चित लोक तथा दोहोरी गायिका तथा मोडल ज्योति मगरले काठमाडौंमा भव्य घर बनाएकी छिन् ।
कलाकारिता बाटै उनले काठमाडौंमा घर बनाएको कुरा पहिले नै बताएकी थिइन् । कोरोना महामारी शुरु भन्दा पहिले नै बनाइसकेको घरमा हाल उनी बस्दै आएकी छिन् । विकट गाउँ रोल्पामा जन्मेर काठमाडौंमा संघर्ष गर्दै आफूले घर बनाएको कुरामा उनी गौरव गर्छिन् ।
काठमाडौंको कोटेश्वरमा उनले तीन तलाको भव्य विशाल घर बनाएकी छन् । अविवाहित गायिका मगरले अब बिहे गर्ने इच्छा पनि प्रकट गरेकी छन् । उनले आफुले घरज्वाँई बस्ने दुलाह खोजिरहेको तर मन मिल्ने मान्छे नपाएको पनि उल्लेख गरिन् ।
रमाइलो गर्दै उनले भनिन् घर भैसक्यो अब घरजम गर्ने तयारीमा छु । ज्योती मगर विशेषगरी उनका गीत र भिडियो अनि समय समयमा दिने बयानका कारण प्रायः चर्चामा रहने गर्छन् । नेपाली समाजले उनका धेरै गीतहरूलाई पाच्य मान्दैन । दशकभन्दा लामो समयदेखि कलाकारीतामा सक्रिय उनले नाम र दाम दुवै कमाएकी छन् । पछिल्लो समयमा उनले आफ्ना गीतहरुमा केही परिवर्तनहरू देखाउन थालेको देख्न सकिन्छ । शुरुवातमा उत्ताउला र उच्छृंखल हुने गीतहरू अहिले अलिकति सुधार भएको हुन सक्ने धेरैको बुझाई रहेको छ ।
उनको घरमा उनका दिदीका छोरा पनि बस्दै आएका छन् । उनीसँग आफ्नै लग्जरी कारपनि छ । उनको शौखिन जीवनशैली निक्कै लोभलाग्दो छ । अरु कालाकारको अवस्था हेर्दा र ज्योतिलाई नियाल्दा उनले आकाश, पाताल हुनेगरी आर्थिक रुपमा सम्पन्नता ल्याएकी छिन् ।
अकस्मात यो के भयो, एक महिला धर्ति माताको खुट्टा समातेर भक्कानिए पछि माताले के गरिन् यस्तो !!
बुवाका बारेमा प्रियंका चोपडाले गरिन् वर्षौपछि यस्तो अनौठो खुलासा
वीर अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको आँखा नि’कालेको अ’फवाह !
अदिति बुढाथोकीले सार्बजनिक गरिन यस्ता तस्बिर। मोहित पार्ने रूप, फिदा बनाउने सुन्दरता( तस्बिर सहित)
कृष्ण र रुपाको जिन्दगीमा खुशी संगै फर्किएको दशैं ( हेर्नुहोस तस्बिर सहित
6 mins अघि
15 mins अघि
23 mins अघि
38 mins अघि